ယောက်ျား မာယာ…။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Aha! Jokes, Satire » ယောက်ျား မာယာ…။	65
Posted by black chaw on Mar 18, 2015 in Aha! Jokes, Satire, Creative Writing, My Dear Diary, Myanma News | 65 comments
အဲဒီ များလှပါတယ်ဆိုတဲ့ မိန်းမတွေ လိုက်လို့မမီတဲ့ ယောက်ျားတွေရဲ့ မာယာ အကြောင်း
တချို့ကိစ္စတွေက ပြန်ပြောပြဖို့ တော်တော် ခက်ပါတယ်…။
အိမ်ထောင်ရှင်ယောက်ျားတွေ ညဘက်အပြင်ထွက်တဲ့အခါ သူတို့မိန်းမကို အကြောင်းတစ်ခုခု
ညဘက် ဘလက်ကြီး အပြင်ထွက်မယ်ဆို မဒမ်ဘလက် ကို အကြောင်းတစ်ခုခု ပြရတာပါပဲ…။
ဘီယာလေး ဘာလေး သောက်ရင်း တွေ့ကြရအောင် လို့ ပြောသွားတယ်…။
ဟိုလဒလေး အင်ဇာဂီ ဖုန်းဆက်သွားပြန်တယ်ကွာ…။
အသည်းကွဲနေလို့တဲ့…။ သူရင်ဖွင့်ချင်လို့တဲ့…။ အဲဒါ သွားနားထောင်ပေးရဦးမယ်ကွာ…။
အဲသလို မာယာမျိုးဆို မဒမ်ဘလက်က ဘယ်တော့မှ တားလေ့မရှိ..။ အားဟိ…။
သွားပေးလိုက်ပါ…ကိုနိုဇိုးမိက ရှင့်ကို တော်တော်ခင်တာ…ဘာညာပေါ့…။
အော်…အင်ဇာဂီ က အသည်း ခဏခဏ ကွဲတယ်နော်…သွားနားထောင်ပေးလိုက်ပါ…ဘာညာပေါ့…။
အဲဒီလို ခွင့်ပြုချက်ရပြီဆိုမှ ဘယ်သွားမလဲ…သွားချင်ရာသွားလိုက်စမ်း…။
ကဲချင်ရာ ကဲလိုက်စမ်း…။ မာဆတ်လား…။ ကေတီဗီလား…။
အဲဒါ…ယောက်ျား မာယာ အဆင့် တစ်ပဲ ရှိသေးတယ်…။
ရှိသေးတယ် နောက်ထပ် မာယာတွေ ဖေါက်သည်ချလိုက်ရဦးမယ်…။
ကိုဆွေ့ ဖားသားကြီး တော်တော် ဖြစ်နေတယ်ကွာ…။ (ဘာဖြစ်တာလဲ ထည့် ပြောစရာမလို)
အဲဒါ အာရှတော်ဝင်မှာ တင်ထားရသတဲ့…။
ကိုဆွေလည်း တစ်ယောက်တည်း ဒေါင်ချာစိုင်းနေတာပေါ့…။
အဲဒါ ဒီည သွားကြည့်ပြီး အားပေးလိုက်ဦးမယ်…။ ဘာညာပေါ့…။
ရွှေတိုက်စိုး အဖေ ဆုံးသွားတယ်ကွာ…။ (ရွှေတိုက်အဖေက ဆုံးတာ ကြာလှပြီ…။ ဒီလိုပဲ အသုံးချရတာပါပဲ…။)
အဲဒါ သွားအားပေးရဦးမှာ ဆိုတော့ ဒီည နည်းနည်း နောက်ကျမယ်ကွာ…။
သွားကြည့်ပေးလိုက်ပါ…။ ကိုဆွေ တစ်ယောက်တည်း ဒေါင်ချာစိုင်းနေမှာပေါ့…။
ရွှေတိုက် အဖေ နာရေးကိစ္စဆိုတော့ သွားရမှာပေါ့…။
အဲဒီလို ခွင့်ပြုချက်ရပြီဆိုမှ သန်းနိုင်သီချင်းကို ဆိုပါဗျာ…။
ဒါက ယောက်ျားမာယာ အဆင့် နှစ်ပေါ့…။
နာရေးကိစ္စလေးတွေ ထည့်ထည့် သုံးရတာမျိုးပေါ့…။
ဆိုတော့ မုသားမပါ လင်္ကာမချောဆိုတဲ့ စကားလိုပါပဲ…။
လိမ်ချင်လို့ လိမ်ရတာ မဟုတ်ရပါဘူး ဗျာ…။
လိမ်မှ အဆင်ပြေမယ့် ဘ၀မို့ လိမ်ရတယ်လို့ပဲ မှတ်ပေးကြပါ…။
နိုဇိုးမိကြီးလည်း သူ့ မိန်းမ ကို ဒီလို မာယာတွေ သုံးခဲ့ဖူးမှာပါပဲ…။
ရွှေတိုက်လည်း သူ့ မိန်းမ ကို ဒီလို မာယာတွေ သုံးခဲ့ဖူးမှာပါပဲ…။
ရွာထဲက အိမ်ထောင်ရှင်ယောက်ျားတွေလည်း ဒီလို မာယာတွေ သုံးခဲ့ဖူးမှာပါပဲ…။
တချို့က ကုမ္ပဏီမှာ အလုပ်လုပ်တယ်…။
ဒီည ကွန်တိန်နာ ထုတ်ရမယ်ကွာ ဆိုပြီး မိန်းမကို ဘတ်တတ်တဲ့ ယောက်ျားတွေလည်း ရှိပါတယ်…။
အဲဒီလို များပြားလှတဲ့ ယောက်ျားမာယာတွေကြားထဲမှာ ငိုအားထက် ရယ်အားသန် ရမယ့်
ယောက်ျားမာယာ တစ်ခုကို တင်ပြချင်လို့ ဒီပို့စ်ကို ရေးသားလိုက်ရခြင်းပါဗျာ…။
အငှားကားမောင်းတဲ့ အမျိုးသားတစ်ဦးက တဲ့…။
ဖေဖေါ်ဝါရီ (၂၆) ည ၉ နာရီ လောက်မှာ တဲ့…။
သူ့မိန်းမ နဲ့ သူ့ကားအုံနာ တို့ထံကို ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ ပြောတယ်တဲ့…။
သူ ပေါ်တာ အဆွဲခံလိုက်ရပါပြီ ကားကို ပြည်ထောင်စု လမ်းမပေါ်မှာရပ်ထားခဲ့တယ် လို့
အဲဒါနဲ့ မိန်းမလုပ်သူက လည်း စိတ်တွေပူပြီး ဟိုလျှောက်ပြော ဒီလျှောက်ပြောပေါ့လေ…။
အဲ…နောက်နေ့ မနက် ၁၀ နာရီလောက်ကျတော့ ကိုယ်တော်ချောက အိမ်ပြန်ရောက်လာပါလေရောတဲ့…။
ဇနီးဖြစ်သူနဲ့ ရာအိမ်မှူးတို့က ၀ိုင်းမေးကြတော့မှ ပေါ်တာဆွဲတယ်ဆိုတာ လိမ်ပြောတာသာဖြစ်ပြီး
သူငယ်ချင်း နဲ့ လျှောက်လည်နေတာသာ ဖြစ်ကြောင်း ၀န်ခံခဲ့ရပါတယ်တဲ့။
အဲဒီ ပုဂ္ဂိုလ်ကို ဒဂုံတောင် ရဲစခန်းက ခြေချုပ် နဲ့ ဥပဒေအရ အရေးယူထားပါတယ်တဲ့…။
ရွာထဲက အိမ်ထောင်ရှင် ကိုကိုတို့ ရေ…။
မိန်းမကို မာယာများတာလည်း များကြပါ…။
ပေါ်တာအဆွဲခံရတယ် ဆိုတဲ့ နည်းနဲ့တော့ မာယာမများကြဖို့ သတိပေးလိုက်ရပါတယ်ဗျာ…။
အော်…ယောက်ျားမာယာ သဲ တစ်ဆယ့်ရှစ်ဖြာ…။
Kaung Kin Pyar says: တချို့ကိစ္စတွေများကျတော့လဲ မိန်းမတွေက သိပေမယ့် မသိချင်ယောင်ဆောင်လိုက်တာတွေ ရှိပါတယ် ဦးဘက်ရယ်…။
ဖုန်းတွေ တဂွမ်ဂွမ်ဆက်ပြီး ဘေးနားကရှိတဲ့လူနဲ့ပါ ပြောချင်တယ်လို့ ကျစ်ချင်ရသား…။ ဒါမှမဟုတ် ကျမပါ သတင်းလိုက်မေးသင့်တာပေါ့ဆိုတာလိုမျိုး….။
ုပြောချင်တာက….တချို့ကိစ္စတွေက မသိတာမဟုတ်၊ မသိချင်ယောင်ဆောင်လိုက်ခြင်းသာ ဖြစ်ပါကြောင်း…..။
Wow says: အချိန်တန် လက်ခံမဲ့သူမရှိရင် ချည်တိုင်ပဲပြန်လာမယ်ဆိုတာသိပီး လွှတ်ပေးထားတာမိုးလားး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1191
Kaung Kin Pyar says: ချည်တိုင် ပြန်လာတာတော့ ဟုတ်ပါတယ်…။ ပိုက်ဆံ ပါသွားပြီး ရောဂါပြန်ပါမလာဖို့ပဲ လိုတာ…။
Kaung Kin Pyar says: ဘီပိုး..စီပိုး…ပြောပါတယ်…
Was this answer helpful?LikeDislike 2805
Wow says: အိမ်ဝမှာ Xray တပ်ထားလိုက်… ရောဂါမရှိသေချာမှ အိမ်ထဲအ၀င်ခံ Was this answer helpful?LikeDislike 4150
ယောက်ျား ယူပြီးရင် အဲ့လိုပဲ လွှတ်ပေးထား လိုက်…။
black chaw says: @ Kaung Kin Pyar ;
ယောက်ျား မာဆတ်သွားတာ ကေတီဗီသွားတာ သိလျက်နဲ့
မသိချင်ယောင်ဆောင် ပြလိုက်စမ်းပါ အေ…။
တကယ် မသိတာကို မသိချင်ယောင် ဆောင်သလို ဟန်ဆောင်တာကလည်း
Kaung Kin Pyar says: ဟင့်အင်းးးး သများက အတူလိုက်မှာ…
တောင်ပေါ်သား says: ဒီကားဆရာ အတော်ညံ့
အမေ ဒီည ချန်ပီယံလိဂ် ရှိလို့ ဘာလို့ဆို ပြီးပြီ
ကိုးကုန်းကိုးကျင်း သွားချင်ရာ သွားပေတော့ပဲ ဟဲ ဟဲ ဟဲ
black chaw says: @ တောင်ပေါ်သား ;
ဘယ့်နှယ့် အမေ ကို လိမ်တာတွေ လာပြောနေရတာလဲဗျာ…။
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: အိမ်​မှာစကိုင်းပျက်​ကြီးအလကားရထားပြီး ဘယ်​နားချန်​ပံသွားလိဂ်​ဦးမှာလဲဆိုပြီး ထမရိုက်​ဘူးလား
black chaw says: @ နန်းတော်ရာသူ ;
အေးလေ…။ အဲ့လူကြီးလိမ်တာတွေက မပိရိလိုက်တာ…။
ချန်ပီယံလိဂ် ဆိုမှ ၀င်လာတော့တယ် မမ နန်းတော်ရာသူရယ်…။
တောင်ပေါ်သား says: ကျုပ်က အော်ဟစ်အားပေးတတ်တော့ သန်းခေါင်ကျော်ပွဲတွေ အိမ်မှာမကြည့်ရ ဟွန်း သိလည်းး သိပဲနဲ့ Was this answer helpful?LikeDislike 1372
•*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ says: ၀ါသနာကမ​နေဘူးအူးဘလက်​
Was this answer helpful?LikeDislike 1191
Kaung Kin Pyar says: အူးမျိုးကတော့လေ….အမေတစ်ယောက်ကိုတောင် ပတ်ပြီး သွားလာနေရတာ…နောက်ထပ် ပတ်ရမယ့်လူရှာနေသေးတယ်…။
တောင်ပေါ်သား says: အဲဒီအခါ အိမ်ကခွာတော့ဝူး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 5021
Mr. MarGa says: မုသားမပါ လင်္ကာမချော ဆိုတဲ့ စကားပုံကို ဘယ်ပညာရှိ ထွင်သွားတယ်မသိ
ဒီစာကို မမအိမ်စိုးမေ ဖတ်မိပါစေဗျားးးးးးးးးးးးး
Kaung Kin Pyar says: ဟိုက ကလော်လွှတ်လိမ့်မယ်…
ဟာသ ကို ဟာသ လို ဖတ်တတ်တဲ့
စာဖတ်နာမှု မဒမ်ဘလက်မှာ ရှိပြီးသားပါ ခင်ဗျာ…။
Mr. MarGa says: အိမ်းးးး
သူလည်း တန်ပြန်မာယာများနဲ့ ပြန်ချုပ်ထားတယ်ထင်ပ
ခင်ဇော် says: မသိချင်ယောင်လည်း ဘယ်တော့မှ မဆောင်ဘူးး
အ တယ် ထင်မှာဆိုးလို့။
အာ့ကြောင့် ဘယ်ဒူမှ လည်း နာ့ နား ကြာကြာမနေချင်ဂျဝူးးး
ဗုံဗုံ says: သများက​တော့ သများချစ်​တူအ​ကြောင်းကို
ထမင်းစားတာအစ အီးအီးပါတာ အဆုံးအကုန်​
ပါး​အေး​နေဗျ​စေ တဲ့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4150
black chaw says: @ ဗုံဗုံ ;
အဲဒီလို ရိုးသားတာ ကောင်းပါတယ်ဗျာ…။
ထမင်းအတူစား…၊ အီးအတူပါ ပေါ့ သမီးရယ်…။
ဖုန်းမကိုင် ပဲ ဘာတွေ မရိုးမသား လုပ်နေသလဲမှ မသိတာ…။
နားအေးပါးအေး နေချင် ရည်းစားမထားနဲ့လို့ ပြောပလိုက်…။
ဗုံဗုံ says: ​ပြောပစ်​လိုက်​ပြီ ဖုန်းဆက်​​တော့ တူအီးပါ​နေဒယ်​
ခု အူးဘလက်​ကို လိုက်​ရှာ​နေဒယ်​တဲ့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1880
အူးစည် says: နားအေးပါးအေးနေချင်တဲ့ ယောက်ျားတွေက ပိုကြောက်ဖို့ကောင်းလား..လို့.. အဘ တစ်ယောက်ပြောခဲ့တယ်ဆိုးလားပဲ..။
ကျော့်နားအေးပါးအေးနေတုန်းကဆို အဲယားကွန်းခန်းထဲကကို ထွက်တော့ဝူး..။ သင်္ဘောပေါ်မှာတုန်းက ပြောပါရယ်.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4150
black chaw says: @ အူးစည် ;
ဟို စာဖတ်နေတဲ့ အဘ ပြောသွားတာလား…ဟင်…။
Was this answer helpful?LikeDislike 4150
black chaw says: @ ခင်ဇော် ;
naywoon ni says: ဟီး အ​နော်​လဲ တစ်​ခါတစ်​​လေ ဂျီ​တော့ ချက်​တင်​မှာ အဲ့လို မာယာဖူးတယ်​ဗျ ။ အ​ပျော်​​ပေါ့ ။ ( အဲ့သလို မ​ပြောလို့​ကောရမလား ခု​တော့ တစ်​​ယောက်​မှ မရှိ​တော့ဘဲကိုး ) ပိုက်​ဆံလဲ ​တော်​​တော်​ကုန်​ဗျို့ ။ အဲ့အ​ကြောင်းနဲ့ စာဖွဲ့ရင်​ ​ပြောမကုန်​ပါပဲ ။
ရင်​ခုန်​စရာ မ​ကောင်းလှပါဘူးကွယ်​ ။
လို့စ​တေးတပ်​ထားရင်​ ……. ဟဲဟဲ
မူရင်းကဗျာ ​ရေးတဲ့သူ​တွေ့ရင်​​တော့ ဘယ်​လိုများ​ပြောမလဲမသိ ။
မူရင်းကဗျာက ” ၃၅ ​အေ လမ်း​ပေါ်က ​ကောင်းတစ်​​ယောက်​အ​ကြောင်း ” ကဗျာရှည်​​ရေးခဲ့တဲ့ မန်​​လေးက သူငယ်​ချင်း ဆရာ​အောင်​ဂျမ်း ရဲ့ ကဗျာကို စာလုံး​တွေ​ပြောင်းချလိုက်​တာ​လေ
ကိုနေကြီးရဲ့ မာယာတွေ ဘယ်လိုဆိုတာ လေ့လာချင်စမ်းပါဘိ…။
ဦးကျောက်ခဲ says: ကျောက်စ်ကတော့ ကာရာအိုကေ စင်တင် မာဆတ်… ဘာမှဝါသနာမပါလို့…
သဲ တစ်ဆယ့်ရှစ်ဖြာတွေ မန်ကျည်းကိုးပင်တွေ သုံးစရာမလို… ညနေစောင်းမှသာ…
“မိန်းမရေ အမှိုက် အောက်ဆင်းပစ်ရင်း ဖွာတော်ဆက်လိုက်ဦးမယ်” ဆိုပြီး…
711 ကနေ ဘီဘီလေးဝယ်ပြီး လောကစည်းစိမ်ကို ခံစားသဗျ … ဟီ ဟိ
အဲဒီ ၀ါသနာမပါ ဘူး ဆိုတာကြီးကပဲ
ခင်ဇော် says: ငြိမ် တယ် အေးတယ် ဆိုတဲ့ ဘဲ (ဂိုင်း) များကို
ရေကူးနေတဲ့ ဘဲတို့ ငန်းတို့ နဲ့ နှိုင်းပါတယ်တဲ့။
ကြည့်ရင်သာ ရေပေါ်မှာ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပဲ။
ရေအောက်ထဲမှာ ခြေက ယက်ကန်ယက်ကန် လုပ်နေတာကို ဘယ်သူ့မှ မမြင်နိုင်သလိုပေါ့။
စိတ်ထဲ ဘယ်လောက် ဂယက်ထမလည်း အပြင်လူ မသိနိုင်လောက်။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 188
Nyo Win says: တိန်………….တည့်တည့်စောင်းပြောနေသလိုပဲ (သူများတွေအပြောခံရပေါင်းများပီ)…:)
black chaw says: @ Nyo Win ;
ကွန်းမန့်လေး ၀င်ချီးမြှင့်ပေးသွားတာ ကျေးဇူးအထူးပါ ကိုညိုဝင်းရေ…။
ကူမားရ် says: အေးနော် ယောက်ျားဒေ များ အတော် မာယာများတာကလား
နာတို့ လူဂျီးဒေ ကျတော့လည်း ဘာမတတ် ညာမတတ်နဲ့ စဟေ့ဆိုတာနဲ့ခံလိုက်ရတာကြီးပဲ
သများတို့တော့ ” သဲလည်းမရော မန်ကျည်း မနှောတဲ့ သစ္စာ ဒိုင်းနမိုက်နဲ့ပဲ မေတ္တာ သိုက်ကို ဖောက် တယ်” ခိခိ အကုန်တစ်စစီဖစ်ကုန် လို့ မနည်း လိုက် ကောက်ပြီးပြန်စုနေရတယ် ခုတော့ အာချား အာချား
pooch says: ယောက်ျားမယာ သဲကန္တာရ တဲ့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4150
black chaw says: @ ကူမားရ် ;
ဟာသ ကို ဟာသလိုသာ ဖတ်စေချင်ပါတယ် ဗျာ…။
ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပဲ ဖတ်စေချင်တာပါ…။
Alinsett@Maung Thura says: မုသားပြောဆိုခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ရမယ် ဆိုပြီး
ဘာသာရေးအရ စည်းကမ်းတင်းကျပ်ထားတာလဲ ကျုပ်တို့ပဲ… မုသားမပါ လင်္ကာမချော ဆိုပြီး … မုသားလေးတွေ (ကိုယ့်ဘာသာတော့ သုံးသင့်တယ်ယူဆပြီး) သုံးနေကြတာလည်း ကျုပ်တို့ပဲ… ။
. တွေ့ရအောင်လို့ လှမ်းခေါ်တဲ့အခါ…
ငါမင်းနဲ့ တွေ့ဖို့ အချိန်မရှိလို့ပါ…တို့..
ငါ မင်းကို အခု မတွေ့ချင်သေးဘူးတို့ ….
အရှိ အရှိအတိုင်း… ပြောဖို့ အားနာသလိုလို ဘာလိုလိုနဲ့..
ငါ မအားလို့ပါ…ဆိုပြီး မုသားဆို အကြောင်းရှာပြကြတာလည်း ကျုပ်တို့ပဲ.. အဲ… မုသားမပါ လင်္ကာမချောဆိုတဲ့စကားကလည်း
ဒီလူတွေ ဒီလူတွေကြားတော့ မှန်နေတာပဲ…
မင်း ဒါလေး လုပ်ပေးပါလို့ ပြောလာတဲ့သူကို
ဟင့်အင်း.. ကျနော် ဒါကို လုပ်ဖို့ အချိန်မရှိလို့  မလုပ်နိုင်ပါဘူးလို့ ပြောမိရင်… မုသားမပါတဲ့စကားမို့….
ဟိုတဖက်က ခါးခါးသီးသီး နာကျည်းပြန်ရော…
ဆိုတော့…. မုသားပြောခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ၏ဆိုတာကြီး ငါးပါးသီလထဲက ဖြုတ် ဖြုတ်…
kai says: ငါးပါးသီလက.. ဂေါတမဗုဒ္ဓကဟောခဲ့တာလည်းမဟုတ်…။ ရှေးဂျူးသမ္မာဟောင်းကျမ်းမှာလည်းပါတဲ့.. လူ့ကိုယ်ကျင့်တရားတွေပါ..။
သီလက မမှန်စရာအကြောင်းမရှိ..။ လိုက်နာခက်စရာအကြောင်းလည်းမရှိ..။
ထေရာဝါဒသမားတွေပြဿနာက.. အဲဒီသီလတွေကို.. အဖွင့်မှားနေကြတာလို့ပြောရမယ်..။
မုသာဝါဒ. လိမ်မပြောရဆိုတာမယ်… သူသူ/ကိုယ်ကိုယ်.. လူထိခိုက်နစ်နာမှုမရှိစေတဲ့လိမ်တာမျိုးက အိုကေတယ်မှတ်ရမယ်..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: white lie
White lie isalie that is told to be polite to someone or not to upset him or her.
Alinsett@Maung Thura says: အဖြူရောင် မုသားပေါ့နော်..
ဟို ဆံပင်ညှပ်ဆရာကြီးကို လိမ်သွားတဲ့ အမွှာညီအစ်ကိုရဲ့ လိမ်ညာမှုလေး…
ချစ်စရာတော့ ကောင်းသား… Was this answer helpful?LikeDislike 4150
black chaw says: @ kai ;
ကူမားရ် says: မယ်ပုခ်ျ
ကန္တာ ရဆိုတာ နေ့ပူပေမယ့် ညကျ အတော် အေးတာ အဲ့ဒါလေးတော့မှတ်ထားပါကွ
ကောင်းတဲ့ဘက်ဆိုးတဲ့ဘက်ကလေး မျှတွေးပါကွယ် ပြီးတော့ ကန္တာ ရတွေမှာ အိုအေစစ် ကလေးေ ရှိဒယ်ဆိုတာလည်း မေ့မထားနဲ့ဦး ခစ် ခစ်
Ma Ma says: ယောင်္ကျားမာယာဆိုပြီး မိန်းကလေးတွေကို အသိပေးသလိုလိုနဲ့…..
ကိုယ့်ချင်းကိုယ့်ချင်းတွေကို ဒီလိုမာယာတော့ဖြင့် မသုံးလေနဲ့….. လို့
စေတနာတွေ ပိုနေသလိုပဲ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4150
black chaw says: @ Ma Ma ;
မှုခင်းသတင်း ထဲက သတင်းတစ်ပုဒ် ရယ်…။
မောင်ဂီ ကျွန်တော့်ကို စကားနာထိုးတတ်တာလေး တစ်ခုရယ်…။
ပေါင်းပြီး ဒီပို့စ်လေး ဖြစ်လာတာပါ မမရေ…။
Crystalline says: အူးဘက်ပို့စ်ဖတ်ပြီး ကျမအစ်ကိုက တော်တော်လိမ်မာတာပဲ..မိသားစုစားပွဲသွားတာ..အလုပ်ကိစအပြင်ထွက်တာ.. ကျမပူဆာလို့အပြင်ဆိုင်တွေလိုက်စား..လိုက်ပို့ပေးတာကလွဲအပြင်ကိုမသွားတတ်တာ.. ကျမသိတတ်က
တည်းက လက်ဖက်ရည်ဆိုင်..ဘီယာဆိုင်ထိုင်တာမမြင်ဘူး အူးဘက်တို့နဲ့ကွာပါ့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4150
black chaw says: @ Crystalline ;
အွန်…။ ဦးဘက် က လူလိမ္မာကြီးပါလို့ တစ်ခါမှ မရေးဘူးပါဘူးကွယ်…။
ယာမကာလုလင် မှန်း တစ်ရွာလုံးသိကြပါတယ်အေ…။
မြစပဲရိုး says: “လက်မခံ လဲ နေ၊ တစ်ခြားသူကိုယူ ရင်တော့ ဘုန်းကြီးဝတ်လိုက်မယ်”
ဆိုတဲ့ မာယာ စကား ကို ယုံ ခဲ့ပြီးမို့ …..
အခုလဲ ည ဘက် နောက်ကျရင် ဘုန်းကြီးကျောင်း သွား တယ် လို့ ဘဲ ဆက်ပြီး မှတ်ထားပါတော့ တယ်။
မွသဲ ( 17082011 ) says: ပြောမနိုင်လို့မသိခြင်ထောင်ထောင်လွှတ်ထားလိုက်တာမြန်း ယောက်ကျားမာယာဒဲ့အေ ဟိဟိ။ ရှင်ပါးစပ်ဟလိုက်တာနဲ့ရှင့်ဗိုက်ထဲအူဘယ်နှစ်ခွေရှိလဲကျုပ်သိဒယ်ဒဲ့ စိတ်ထဲကပေါနေဒါ အဲ့ပြေးဘီ
black chaw says: @ မွသဲ ;
မိန်းမမာယာတွေ ထုတ်သုံနေရ မဟုတ်လားအေ…။
Shwe Ei says: -အူးဘလက်ကလဲ…ပညာတွေ သိပ်ရှိုတာဘဲ..
-ဒီလောက်လေးကို ယောက်ကျား မာယာတဲ့.. -ဒီထက်လန်းတာတွေ ထုတ်ပြရင်…သူများယူသုံးမှာ ကြောက်တယ်လား..ဟမ် :P
black chaw says: @ Shwe Ei ;
Mike says: .ကျုပ်ကတော့ မာယာမများပါဘူး..ဗြောင်ပြောသွားတာပဲ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4150
အိမ်ပိုင်လို့ ဂေါ်လီထွက် ရိုက်တဲ့ ကိုကိုပေါ့…။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1241
Novy says: ဒီမယ် မောင်မဲ
တို့များမိန်းမတွေကို အတယ်လို့မထင်လိုက်လေနဲ့ အချင်ယောင်ဆောင်နေတာ
ရှင်တို့ကေတီပီ တို မဆက်လောက်ကတော့ ပျင်းသေးတယ်
တို့တွေ ဗျူ တီစလွန်းသွားတာတို့ ရှေ့ာပင်ထွက်တာတို့ကို ရှငိတို့မသိအောင် အချင်ယောင်ဆောင်နေတာ
black chaw says: @ Novy ;
manawphyulay says: တစ်ခါတလေကျတော့လည်း သူတို့ဘာလုပ်လုပ် မမြင်ချင်ယောင် မသိချင်ယောင် ဆောင်ရတဲ့နေရာတွေလည်း ရှိတယ်။ ဒီလိုကျတော့လည်း သူတို့လုပ်တာ မိန်းမမသိဘူးလို့ သူတို့မာယာတွေနဲ့ လှည့်ချင်သေးတယ်ရှင်။
black chaw says: @ manawphyulay ;
အခုတော့ အပျိုကြီးတစ်ယောက် ဒီလို စကားဝိုင်းမှာ
၀င်ဆွေးနွေးလို့ ရသွားပြီ ပေါ့…။
မသိချင်ယောင်ဆောင်တာလည်း သတိထားပြီးဆောင်ပါ အပျိုဟောင်းကြီးရေ…။
ဆောင်ရင်းဆောင်ရင်း တကယ်မသိတဲ့ ဘ၀ ရောက်သွားမှာကို
လုံမလေးမွန်မွန် says: နေပါဦး.. အိုက် ကေတီဗီတွေ.. မာဆတ်တွေ.. ဘီယာဆိုင်တွေက သများသွားချင်တယ်ဆိုရင်ရော.. အိုက်လို မာယာသုံးလို့ရလားဟင်င်..
black chaw says: @ လုံမလေးမွန်မွန် ;
အံစာကြီး က မသိချင် ယောင်ဆောင်ပေးရင် ရတာပေါ့အေ…။
lu lu says: အိမ်ထောင်ရှင်တွေပဲ မာယာ များတာ မဟုတ်ဘူး
သမီးရည်းစားဘွတည်းက မာယာ အတတ်ပညာတွေတတ်ပြီးသား
ကိုယ့်ချစ်သူအထင်ကြီးအားကိုးချင်လာအောင် လေကြီးမိုးကြီးနဲ့ 
black chaw says: @ lu lu ;
မာယာတွေ ရိုးဟိုးဟိုး နေပြီ…ပေါ့…နော်…။
uncle gyi says: အဆိုတော်အေးအေးအောင်က
black chaw says: @ uncle gyi ;
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၄၀ လောက်ကတည်းက
မာယာများတဲ့ ယောက်ျားတွေ ပေါ့နော်…။